Somaliland: “Waxaanu Ku Baaqaynaa In Dalkan Caddaalad Lagu Dhiso, Haddii Caddaalad La Waayo Wixii Dhacay Uunbaa Dhici, Madaxweynaha Waxaanu Leenahay Wixii Aad Ka Dagaalantay Ka Dhawr Beelaha Oo Hagaag Wax Ugu Qaybi”.. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Waxaanu Ku Baaqaynaa In Dalkan Caddaalad Lagu Dhiso, Haddii Caddaalad La...
Golaha dhaqanka Beelaha Makaahiil Dheere ee Samaroon ayaa si adag uga hadlay xaaladda dalku marayo iyaga oo si weyn isu barbar taagay shirkii Tol-wanaaje2 ee dhawaan Beelaha Garxajis ugu soo xidhmay Buurta Gacan Libaax oo ay ku tilmaameen mid umadda isku wadaya oo mudan in la garab joogsado iyaga oo sheegay in qodobadii shirkaasi ka soo baxay ay ka beel ahaan aad u taageersan yihiin soona dhawaynayaan.
Odayaal iyo wax-garad ka mid ah Guddida Beesha Makaahiil Dheere oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Boorama ayaa waxa ay si buuxda u taageereen nuxurka qodobadii ka soo baxay shirkii Tol-wanaaje2 ee Beelaha Garxajis halka ay Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixina ugu baaqeen sida ay hadalka u dhigeen in aan dadka looka la eexaan ee si caddaalad ah dadka la isugu wado oo dalka wax loogu wada qabto.
Ugu horrayn Guddoomiye ku xigeenka Guddida Beesha Makaahiil oo hadalkaasi ka hadlay waxa uu yidhi: “Shirweynihii Tol-wanaaje2 ee Buurta Gacan Libaax ugu soo xidhmay Beelaha Garxajis waanu taageersanahay. Si buuxda ayaanu u taageersanahay. Madax-dhaqameedkayagu waxa ay ka mid ahaayeen kuwii madasha shirka lagu casuumay. Markii aannu ku sii soconay hadal hayntu way iska badnayd oo wax badan baa laga hadlayay laakiin markii aannu meesha tagnay waxa aannu aragnay calankii Somaliland oo meel walba ka babanaya oo ka baxaya taasina waxa ay beenisay wixii laga hadal hayay nimankaasi. Haddii aannu nahay odayaashii iyo wax-garadkii beesha Makaahiil Dheere waxaanu ayidnay oo si buuxda u taageersanahay 8-dii qodob ee shirkaasi ka soo baxa”.
Dhinaca xubin oday dhaqameed ah oo isna hadalka qaatay ayaa waxa uu yidhi: “Sidaa uu sheegay Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Guddida Beesha Makaahiil Dheere u sheegay annagu ka beel ahaan si buuxda ayaannu u taageersanahay shirkaa Beesha Garxajis u soo dhammaaday. Dhammaan qodobada shirka ka soo baxay aadbaanu u taageersanahay annaga oo u aragna in uu dalka iyo dadka xal u yahay. Guddidii noo tagtay ee shirka nooga qayb gashay way nooga warrameen waanan ku qanacnay waanan taageersanahay ka beel ahaan. Uma aragno wax liddi ku ah Somaliland ee waxaanu u aragnaa wax xal u ah oo aan garab taaganahay. Beelaha cabanayay oo dhan ee Somaliland ayay qodobadaasi dan u ahaayeen waxaanan taageersanahay in dastuurka Somaliland la furo oo xeerkii umaddani lahayd lagu noqdo ee wax wada lahaanshaha si umaddani u sii wada jirto oo aan loo kala yeelan dalka”.
“Waxaanu aad iyo aad u garab taaganahay oo u buunbuuninaynaa oo jeclaysanay shirkii Beelaha Garxajis ugu soo dhammaaday buurta Gacan Libaax. Waanu ku diirsanay waanan taageersanahay. Warka ka soo yeedhay shirkaasi waxa uu ahaa mid umadda danteeda ka talinaya oo umadda isku wadaya. Sida aad la socotaan shirkaasi odayaashii beesha Galbeedku way tagtay. Qodobada shirkaasi ka soo baxay waa kuwo ina anfacaya dhammaanteen. Waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa in dheg dabacsan lagu dhagaysto oo il soo jeedda lagu eego go’aamada shirkaasi ka soo baxay sidii loo fulin lahaa ee xukuumadda qaybteeda uga qaadan lahayd. Annaga waxa nalagu yaqaanaa in aannu nabadda eegno oo aannaan wax umadda kala gaynaya marnaba ku kicin. Sidaa darteed aqbali mayno dhinaca kale cid si gaar ah wax u maroorsata oo wixii la wada lahaa garab marta. Waxaanu ku baaqaynaa in dalkan caddaalad lagu dhiso. Haddii caddaalad lagu dhisi waayo wixii dhacay uunbaa dhici. Madaxweynaha Somaliland waxaanu leenahay wixii aad ka dagaalantay ka dhawr beelaha oo hagaag wax ugu qaybi”. Ayuu yidhi oday kale oo ka mid ahaa guddidan beesha u hadashay.
Gabogabadii shir-saxaafadeedkaasi ay odayaasha Beelaha Makaahiil Dheere qabteen waxa ay kaga hadleen xaaladda Deegaanka Banka Galbeed iyaga oo sheegay in ay laba mid uun taageersan yihiin oo ah in sidiisii hore loo daayo sida ay hadalka u dhigeen oo ay ciidamadu ka manaafacaadsadaan bankaasi iyo in beelaha loo fasaxo ama ha la isku dilo ama halagu heshiiyee.
Somaliland: Wasiirka Daakhiliga oo Ku Gacan Saydhay Mudaharaad WADDANI Iclaamiyay